Mamapacha refuge, indlu ehlala ehlathini - I-Airbnb
Mamapacha refuge, indlu ehlala ehlathini
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAndrea
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAndrea iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Siyi-Mamapacha Refuge, indlela yokuphila ekhuthaza ukuzinza. Sifumaneka imizuzu engama-20 ukusuka eGaragoa kwiimitha ezingama-2,180 ngaphezu komgangatho wolwandle, sihlala sijikelezwe yi-biodiversity yehlathi eliphakamileyo lase-Andean, imithi ye-gaque, isandi seentaka kunye namanzi.
Le yindlu yokuhlala, eyakhiwe ngobuchule be-bioconstruction, kunye nazo zonke izinto kunye nomgangatho ukuze ukwazi ukwabelana nosapho okanye nabahlobo kwindawo yendalo, ekhululekile kunye neyolileyo.
Ifama yethu ikwindawo yebhayoloji eyahlukeneyo kwaye ikufuphi neMamapacha massif. Yenzelwe ukukhuthaza impilo ezinzileyo usebenzisa ubuchule be-bioconstruction obubuyisela iindlela zokwakha zemveli, ezenza ukuba indlu ibe nentuthuzelo yobushushu kwaye amava okuhlala kuyo asempilweni. Sifuna ukunciphisa impembelelo izakhiwo kunye nobomi bomntu obuhlala bunayo kwi-ecosystem, sifuna ukufumana indlela ehambelanayo yokuphila kunye nokukhula kunye nendalo equlethwe kuthi.
Uya kuba nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu esinendawo ezi-6 kunye nazo zonke izixhobo zokusebenza ukuze wenze amalungiselelo akho, igumbi lokutyela eliphangaleleyo kunye neendawo eziluhlaza ezinendawo ye-BBQ, i-oveni ebaswa ngamaplanga kunye neendawo zokonwaba. ihlathi kunye nomlambo. Indawo ikhuseleke kakhulu kwaye izolile ukonwabela imeko yendalo kwindawo yabucala kunye nentuthuzelo.
Apha unokuziva ukhuselekile kwindawo yoxhulumaniso olunzulu kunye nendalo, unokuphefumula umoya omtsha, uhambe ngaphandle kwezithintelo, ushiye iingcango kunye neefestile ezivulekileyo kwaye uzive ukhululekile ecaleni kwemithi.
+ Izithako zesidlo sakusasa, ngokwenani labantu: Amaqanda eCreole, isonka samagcisa, itshokolethi yobugcisa kunye neziqhamo.
+ Ukuba awunayo into yokuhamba, siya kukubonelela ngokugqithiselwa ukusuka kumasipala waseGaragoa ukuya efama kunye nokubuya.
Sine-RNT YOBHALISO KUZWELONKE LOKHENKETHO kwaye sikhuthaza ukhenketho olunenkathalo noluzinzileyo. Sixhasa uqoqosho lwasekhaya ngokuthenga iimveliso zalapha ekhaya.
Ifama ikwindlela yaseQuigua apha ngasentla, abamelwane bethu banobuhlobo kakhulu kwaye banokukunika iimveliso ezinje ngecurd, amaqanda eCreole okanye ubisi. Ukuba ufuna ukwazi i-gastronomy yendawo, kunokwenzeka ukuba sinokucebisa umntu olungiselela isityu kwi-cauldron okanye inkukhu yenkukhu.
Ngeekhilomitha ezili-1 kukho iindlela ezintathu onokucwangcisa ukutyelela: i-Jucual la Maravilla de Mamapacha, i-Alto del Águila kunye ne-El Secreto Private Reserve, ukuba unomdla siya kukudibanisa kunye nezikhokelo zale mizila. Unokuhamba ngebhayisekile yeentaba ecaleni kwendlela entle okanye ecaleni kwendlela yasebukhosini yakudala.
Ukuba ufuna ukwazi umtsalane weTenza Valley, siya kuqaphela ukukunika izalathisi eziyimfuneko kunye nonxibelelwano ukuze ukonwabele ukhenketho lwendalo kunye namashishini asekhaya.
Sikumamele ukufika kwakho, sisebenza neeprojekthi zokhenketho ezilalini kwingingqi, sinokukunxibelelanisa ngovuyo ukuze ukwazi ukonwabela amava njengomsebenzi-mgodini usuku, ukuhamba kwezona ndlela zintle kulo mmandla okanye ukonwabele ukutya okuqhelekileyo. le Tenza Valley.
Sikumamele ukufika kwakho, sisebenza neeprojekthi zokhenketho ezilalini kwingingqi, sinokukunxibelelanisa ngovuyo ukuze ukwazi ukonwabela amava njengomsebenzi-mgodini usuku, ukuham…
Inombolo yomthetho: 86747